कसलाई छान्दैछ एमालेले मुख्यमन्त्री ? - विवेचना
कसलाई छान्दैछ एमालेले मुख्यमन्त्री ?
February 1, 2018 2,100 Views
झापा । माओवादी केन्द्रसँग प्रदेशसभाको भागबण्डा सकिएपछि गठबन्धनको मुख्य दल एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीको दौडधुप जारी छ । एमालेको मंगलबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेता सम्भव भएमा सहमतिमा वा नभएमा आन्तरिक निर्वाचनबाट छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस निर्णयले मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीमध्ये कतिपयलाई खुसी बनाएको छ भने कतिपयका लागि त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ । वाम गठबन्धनबीच माघ १४ मा भएको भागबण्डाअनुसार नेकपा एमालेले चार मुख्यमन्त्री र माओवादी केन्द्रले दुईवटा मुख्यमन्त्री पाएका छन् । दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार १, ३, ४ र ५ प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेलाई दिइएको छ भने बाँकी ६ र ७ प्रदेशमा माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ । यसैगरी प्रदेश १, ३, ६ र ७ को प्रदेशसभाका सभामुख नेकपा एमालेबाट हुनेछन् भने प्रदेश ४ र ५ को प्रदेशसभाको सभामुख माओवादी केन्द्रले पाउने वाम गठबन्धनको सहमति छ ।
प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेता सम्भव भएमा सहमतिमा वा नभएमा आन्तरिक निर्वाचनबाट छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयले मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीमध्ये कतिपयलाई खुसी बनाएको छ भने कतिपयका लागि त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ । आकांक्षी नेताको दौडधुप प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेता जो हुन्छ, ऊ नै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हुनेछ । प्रदेश ५ ले एमाले संसदीय दलको नेतामा शंकर पोखरेललाई छनोट गरिसकेको छ । उनी मुख्यमन्त्री हुने पक्कापक्की छ ।
दलको नेता नै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने भएकाले एमालेभित्र अहिले नेताका लागि आकांक्षी बढेका छन् । प्रदेश १, ३ र ४ मा मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता बन्न अहिले धेरै नेताहरूले आकांक्षा राख्दै आएका छन् । प्रदेश १ मा एमाले सचिव तथा प्रदेश संयोजक भीम आचार्य र पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रदेश सहसंयोजक शेरधन राईबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यी दुईसँगै जीवन घिमिरे, हिक्मत कार्की, राजेन्द्र राईले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन् । तर, मुख्य प्रतिस्पर्धा भने भीम आचार्य र शेरधन राईबीचमै देखिन्छ ।
गत शनिबार आचार्यले पत्रकारहरूसँग विशेष भेटघाट गरे भने मंगलबार राईले पत्रकार भेटघाट गरेर आफो दाबी प्रस्तुत गरे । आचार्य एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहका हुन् भने राई संस्थापन पक्षका नेता हुन् । यस्तै, प्रदेश ३ मा एमाले उपाध्यक्ष तथा प्रदेश संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्य, पोलिटब्युरो सदस्यहरू राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाईं, सानु श्रेष्ठलगायतका नेताहरू संसदीय दलको नेताको आकांक्षी छन् । एमालेको भागमा परेका चारवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमध्ये अन्य प्रदेशमा पुरुषहरूको बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । त्यसैले, पार्टीभित्र एक मात्र महिला पदाधिकारीको व्यवस्थापन र सन्तुलनका कारण पनि उपाध्यक्ष शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने कतिपयको लविङ छ । तर, उनका प्रतिद्वन्द्वी पाण्डेको प्रभाव र पँहुच पनि पार्टीमा उत्तिकै बलियो छ । गत महाधिवेशनमा शाक्यले माधव नेपालको प्यानलबाट उपाध्यक्ष जितेकी थिइन्। मुख्यमन्त्रीकी आकांक्षी शाक्य प्रदेश संसदीय दलको नेता स्थायी समितिले सर्वसम्मत छान्नुपर्ने बताउँछिन् । मंगलबारको स्थायी समितिको बैठकमा समेत नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले संघीयताको पहिलोपटक अभ्यास भइरहेकाले नयाँ संरचनामा प्रदेश सरकार बन्न लागेकाले सर्वसम्मत दलको नेता र मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार चुनेर जानुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएमा पाण्डे बलियो हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश ४ मा एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङबीच कडा रस्साकस्सी छ। त्यसो त यी दुवै बलिया आकांक्षीसमेत हुन् । नेता पृथ्वी अध्यक्ष केपी ओलीका भरपर्दा मानिन्छन् भने किरण उपाध्यक्ष वामदेव गौतम गुटका एकमात्र दाबेदार भएका छन्। अन्य प्रदेशमा ओली र नेपाल नजिकका नेताहरू मुख्यमन्त्री हुँदैछ । पार्टीमा सन्तुलन कायम गर्न किरणलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने मत पनि पार्टीभित्र रहेको स्रोतहरुले बताएका छन् ।
Previous यसकारण बदनाम छ इन्डोनेसियाको यो बजार
Next छमछमीबाट बाहिरिए एलेक्स
राष्ट्रिय सरसफाइ टोली मोरङका गाउँमा
बिर्तामोडका २० कार्यविधि पारित
Pingback: spells for success and prosperity
Pingback: TRADITIONAL SPELLS
Pingback: bathroom showrooms walnut creek
Pingback:7sentyabrya 5378
Pingback: dogs with curly tails
Pingback: den rozhdeniya 18 avgusta
Pingback: Prazdniki s 12 avgusta po 19 marta
Pingback: firefox mp3 youtube downloader
Pingback: kalendar 1975
Pingback: kalendari 2018
Pingback: beauty guide
Pingback: med school entrance exam
Pingback: 13 ijunja prazdnic
Pingback: agent p online games
Pingback: placa mãe positivo pos-ag31ap
Pingback: samsung un55fh6030fxza manual
Pingback: krasivye jero kartinki
Pingback: male vitamins
August 16, 2017 38,743
August 19, 2017 9,365
play montezuma free nj: play montezuma free nj [...]Sites of interest we havealink to[...]...
play casino slots in new jersey: play casino slots in new jersey [...]just beneath, arealot of absolutely not r...
play free slots in new jersey: play free slots in new jersey [...]Here isasuperb Weblog You may Discover Inte...
play montezuma free nj: play montezuma free nj [...]although sites we backlink to beneath are considerab...
play free slots in new jersey: play free slots in new jersey [...]alwaysamassive fan of linking to bloggers t...
२ दशकमा बल्ल बसपार्क - विवेचना https://t.co/SNIl9dMih86 hours ago